आफन्तले घेरिएको नेपाली राजनीति | चितवन पोष्ट
- विष्णु ओस्ती
राणा शासन, पञ्चायती शासन, बहुदलीय शासनदेखि लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि आफन्तले नै घेरिँदै आएको छ नेपाली राजनीति । पूर्वएमालेदेखि पूर्वमाओवादीसम्म आफन्तले नै घेरिएको थियो । अहिले एकीकरण भएर ठूलो नेकपा हुँदा पनि आफन्तले नै घेरिएको छ नेपाली राजनीति । आफ्नो मान्छे, नातेदारदेखि सबै नजिकका चाकरी गर्ने नेताहरुको ढोकामा उभिनेहरु राजदूत, राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्नै मान्छे, उच्च पदमा आफ्नै मान्छे, भ्रष्टाचारदेखि कमिशन खाने आफ्नै मान्छे । बिचौलिया, दलाली आफ्नै मान्छे । यसरी घेरिँदै आएको छ नेपाली राजनीति ।
संघीय संसद्देखि प्रदेश संसद्सम्मका सांसद्हरुले राज्यबाट पाइने अधिकृतसरहको सुविधा आफ्नै छोराछोरी, भाइ, भतिजा, श्रीमती, भान्जाभान्जी, सालासालीलगायत आफन्तलाई दिलाइरहेका छन् । हुन त पिए कसलाई राख्ने भन्नेसम्बन्धी व्यक्तिको व्यक्तिगत छनौटको विषय हुनसक्छ । तर, राज्यले दिने यस्तो सुविधा सामान्यतः आफन्तको घेराबाहिरका योग्य व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन सके त्यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुने थियो । केही सांसद्हरुले पौष महिनामा पिए नियुक्ति गरेर नेतालाई राजनीति गर्न तथा निर्वाचन जित्न कार्यकर्ताकै सहयोग चाहिन्छ । जब आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचन जित्न कार्यकर्ताको सहयोग चाहिन्छ भने राज्यबाट सुविधा उपभोग गर्नुपर्ने समयमा चाहिँ आफन्तको खोजी गर्नु सकारात्मक कार्य भनिँदैन ।
मन्त्री, संसद्जस्ता पदमा पुगेका नेताले आफन्तको साँघुरो घेराबाट बाहिर निस्केर सोच्न सक्दैनन् भने यो देशको भविष्य कस्तो होला ? राजनीति गर्न कार्यकर्ता, चुनाव जित्न जनता, राज्यको सुविधा उपभोग गर्नचाहिँ आफन्त नै हुनुपर्ने राजनीतिको निराशालाग्दो चित्र हो यो ।
निर्वाचनको समयको मात्र चर्चा गर्ने हो भने पनि सयौँ कार्यकर्ताले मेहनत गरेर रातदिन खटेर मत माग्छन्, मतको सुरक्षा गर्छन् । प्रतिद्वन्द्वी शक्तिसँग भिड्छन् । जनताको पंक्ति पनि निर्वाचनको बेला आफ्नो मन परेको उम्मेदवार या दलको पक्षमा मत दिन्छन् । अनि सहयोग गर्छन् नेतालाई जिताउन । तर, जब नेताले अवसर वितरण गर्ने समय आउँछ अनि उनको मुख्य ध्यानचाहिँ आफन्तले जीवन सुरक्षाका पक्षमा जान्छ । नाता त्यसमाथि आफ्नो परिवारकै सदस्य निकटको आफन्त र विश्वासप्राप्त व्यक्तितिर जान्छ । यो हेर्दा सामान्य लाग्न सक्ने तर राजनीतिमा ठूलो नैतिक प्रश्न बोकेको विषय हो । व्यक्तिको नियत र इमान्दारी नाप्ने भनेकाहरुले सत्ता र शक्तिको प्रयोग कसको हितमा गर्छ भन्ने हेरेर हो । मन्त्री या सांसद् हुनु शक्ति र श्रोत माथि पहुँच हुनु पनि हो । पिएको तलब राज्यले निर्वाचित प्रतिनिधिले जनतासँग सम्पर्क कायम गर्न तथा जनता र राज्यबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्ममका रुपमा कायम गर्न सहयोग पुगोस् भनेर दिने हो ।
यसरी राज्यबाट प्राप्त हुने श्रोत भने सांसद्ले निजी सचिव नै नराखी आफ्ना खल्तीमा समेत राख्ने गरेका छन् । जनताले तिरेको करबाट प्राप्त श्रोतको निजी हितमा गैरकानुनीरुपमा प्रयोग गर्ने यी सांसद्ले राजनीतिक निष्ठा पनि खल्तीमा राखेको बुझ्न गाह्रो छैन । अनाधिकृत रुपमा यसरी बजेट रित्याउने र नराखेका पिएको नाममा समेत आफैँले तलब बुझ्नेले मौका पायो भने घरघडेरीका लागि आफ्नो इमान नै बेच्दैनन् भन्न सकिन्न । सामूहिक प्रयासबाट पाएको पद वापत आउने सुविधा एकलौटी पार्ने यो भन्दा निम्नस्तरको लोभ अन्त कै पाउन मुस्किल पर्छ । यी व्यक्तिमार्फत राजनीतिमा जुन प्रवृत्ति झाँगिदै गएको छ त्यो भने हाम्रो राजनीतिलाई जनसेवा र देशको हितमा लगाउने होइन, व्यक्तिका निजी आकांक्षा पूरा गर्ने माध्यमका रुपमा पतन गराउँदै लगेको संकेत हो । यो प्रवृत्ति नेपालका सबै जसो सत्तासिन या सत्तामा गएका दलहरुको नेतृत्व वर्गको साझा प्रवृत्ति बनेको छ । यसबाट छिट्टै बचिएन भने नेतृत्वको नैतिक स्खलनले समग्र राजनीतिलाई नै वदनाम गराउने निश्चित छ ।
वर्तमान संविधानले आफूलाई समाजवादोन्मुख घोषणा गरेको छ । तर, सत्ताधारी पक्ष र विपक्षको अकुत सम्पत्ति व्यवसाय, निर्माण क्षेत्रमा लगानी र देखि विदेशी पुँजीपति र वैदेशिक शासक वर्गसँगको आत्मीयता र निकटताले गर्दा अरु केही भन्नु आवश्यक पर्दैन । राजनीतिको यसै गिर्दो नैतिकताका कारण सरकारी वा विपक्षी राजनीतिज्ञ सबै जोकरमा र राजनीति हस्यौलीमा परिणत भएको छ । स्थिति कतिसम्म दयनीय भएको छ कि सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रले समेत टेर्न छाडेको छ । भर्खरै कर्मचारीको हड्ताल सम्झौतामा टुंगिएको छ । मन्त्रालय होस् वा सरकारी अफिस, सामान्य र मालदार दुई क्याटेगोरीमा गनिन्छ । मन्त्री या हाकिम कुन मन्त्रालय वा अफिसमा नियुक्ति छ उसको प्रभावकारिता यसैबाट बुझ्ने चलन छ । अर्थात पूँजी र नाफा वर्तमान विश्वमा सर्वव्यापक तत्व र चेतना झैँ विराजमान छन् । अझ हाम्रो जस्तो अल्पविकसित गरिब देशमा त कमिसनको चेतना नै सर्वव्यापक छ । र त्यसैले राजनीति होस वा सामाजिक जीवन दलाल, पुँजी र भ्रष्टाचार स्वाभाविक झैँ देखिन्छ ।
नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार छ भन्ने तथ्य सावित छ । तर यो सत्य होइन, यहाँ त भ्रष्टाचारमा राजनीति छ । भ्रष्टाचार जसले सरकार चलाउँछ, सडक, नहर, भवन, मन्दिर र अस्पताल बनाउँछ सिनेमा बनाउँछ, मिडिया चलाउँछ, अदालतमा बहस गर्छ र यसैबाट झरेका ज्यालाबाट मजदुरको जीवन निर्वाह हुन्छ । कति भयानक । भ्रष्टाचार पनि स्वाभाविक हुन्छ । वास्तविक अर्थमा आम जनसमुदायको पक्षमा समाजवादोन्मुख राज्य बनाउने हो भने बहस र संघर्षको केन्द्रमा नाफा होइन श्रम र श्रमिक हुनुपर्छ । वर्तमान राज्यको चरित्र हेर्दा यो सम्भव छैन । उत्पीडित समुदायले आफ्नो हितअनुकुलको अर्थराजनीति व्यवस्था निर्माण गर्ने आफैँ बहस र संघर्ष गर्नुपर्छ । दुईतिहाइ भनेको जनताकै म्यान्डेट हो । जे पनि गर्न छुट हुन्छ भन्ने अर्थमा यसलाई दुरुपयोग गरिनु हुन्न । जनतालाई दिनुपर्ने शान्ति सुरक्षा र सेवासुविधामा चुक्ने अनि अप्ठ्यारोमा परेपछि लोकतन्त्र माथिको हमला देख्नु वाञ्छनीय हुँदैन । किनभने सरकारमा बस्नेहरुभन्दा उनीहरुलाई सरकारमा पु¥याउने नागरिक बढी चेतनशील छन् । हामी दलीय व्यवस्थाको अभ्यासमा छौँ । यो अभ्यास थालिएको पनि झण्डै तीस वर्ष पुग्दैछ । तर, यस बीचमा कुनै पनि दलले जनताबाट बहुमत हासिल गरे पनि पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन सकेको इतिहास छैन । कांग्रेसले दुई÷दुईपटक बहुमत हासिल गरेको हो । उसले आफ्नै आन्तरिक कारण पूरा अवधि सरकार चलाउन सकेन । यस बीचमा अल्पकालीन सरकार पनि धेरैपटक बने । कम्युनिष्ट नेताहरुकोे नेतृत्वमा पनि सरकार बने तर सबै आ–आफ्नै पार्टी भित्रको किचलोका कारण बिस्थापित हुनुपरेको छ । यो दलीय व्यवस्था शुद्ध हुन नसक्नुको परिणाम हो ।
अर्को कुरा एक वर्षअघि खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न नपाइने भनेर सरकारले नियम बनाएको थियो । त्यसलाई फेल खुवाउन भूमाफियाहले हारगुहार गरे । अहिले आएर उनीहरुको योजना सफल भएको छ । भन्ने बेलामा कृषिप्रधान देश भन्ने तर खेतीयोग्य जमिन एउटा पनि बाँकी नराख्ने नेकपा सरकारको योजनालाई के भन्ने ? स्थानीय तहलाई जग्गा खण्डीकरण गर्ने अनुमति दिएर झन सजिलो पारीदिएको छ भूमाफियालाई । राजधानीलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन माँसिदै छ । यसप्रति नेकपा सरकार र मन्त्रीको आँखा जान सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई ब्यालेन्समा राख्न देशमा कृषि उत्पादन बढाउनु पर्छ । यी सबै जान्दा जान्दै पनि किन जग्गा खण्डकीकरण गर्न खुला गरिन्छ ? जग्गाजमिन बेच्न पाइन्छ तर खेतीयोग्य जमिन खेती कै लागि मात्र बेचिनु पर्छ । अब पनि यसलाई नरोक्ने हो भने भोलीका दिनमा देशमा कंक्रिटको भवनबाहेक केही पनि रहँदैन । जग्गा खण्डीकरणले सीमित व्यक्ति, भूमाफिया या सरकारमा बस्ने केहीलाई फाइदा होला तर देशलाई ठूलो नोक्सान हुनेछ । चेतना भया !